Umkhakha Wezokuvakasha kufanele ukuthi uvulwe nguHulumeni waseNepal
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ZeNepal » Umkhakha Wezokuvakasha kufanele ukuthi uvulwe nguHulumeni waseNepal
Izindaba Ezintsha • Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba! • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba ZeNepal • Izindaba • Ukwakha kabusha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Wtn
Isikweletu: Ezokuvakasha Imeyili
Osomabhizinisi Bezokuvakasha eNepal Bahlangana Ukulekelela Izenzo Zikahulumeni:
INepal ivaliwe ngenxa yemboni yayo enenzuzo enkulu ngenxa ye-COVID-19
Umhlangano wabaphathi abahola phambili kwezokuvakasha, obuhlelwe yilowo owayengumphathi omkhulu weBhodi Yezokuvakasha yaseNepal, u-Deepak Raj Joshi uzimisele ngokucela uhulumeni ukuthi asuse izidingo zokuhlukaniswa kwabahambi abagonyiwe ukuze kukhuthazwe ezokuvakasha eNepal.
Ukukhomba ukuthi abasebenzi bezokuvakasha abaphambili manje sebegonyiwe yimibono yamaqembu ukuthi umkhakha wezokuvakasha kufanele umenyezelwe ukuthi uvulwe nguHulumeni waseNepal.
Ngaphezu kwalokho leli qembu ligqugquzela ukuqala kabusha kwama-visa ekufikeni nasekukhuthazeni ukuhlolwa kwe-PCR esikhumulweni sezindiza.e
Ngenkathi izigaba zaseNepal zisanda kuba no-opened ngaphansi kweminye imikhawulo, njengamahholo ama-cinema nezindawo zokudlela ezinamandla angama-50%, kepha akubanga khona ukuvuselelwa kwemikhawulo yokuhamba yeNepal ezinyangeni eziyisithupha.
UNobhala wePATA uSuman Pandey ujoyine umbono wokuthi ekufikeni kwama-visa kufanele anikezwe abahambi abagonyiwe futhi kususwe nemfuneko yokuhlukaniswa. Uhulumeni osanda kwakhiwa akakagcwalisi izikhala eziningi ezisezingeni lekhabhinethi futhi usematasatasa ezindabeni zangaphakathi zepolitiki namaqembu ezombusazwe aphikisanayo ngakho-ke kusazobonakala ukuthi uhulumeni uyakwazi yini ukuthatha noma yisiphi isinyathelo sokuvuselela lo mkhakha obalulekile womnotho waseNepal.
U-Deepak Raj Joshi futhi ungummeleli weNepal ku Inethiwekhi Yezokuvakasha Yomhlaba, futhi wanikezwa ukujoyina uhlelo lwe-WTN Tourism Heroes Programme.